Tag: traikefa amin'ny fantsona | Martech Zone
Tag: traikefa niampitana
Alarobia, Aprily 21, 2021 Alarobia, Aprily 21, 2021 Zain Jaffer
Ny pivot tamin'ny vanim-potoanan'ny areti-mandoza dia tonga niaraka tamin'ny fanantenan'ny mpanjifa. Raha vao nampidirina sanda, ny tolotra an-tserasera izao dia nanjary tohanana mpanjifa voalohany ho an'ny ankamaroan'ny marika antsinjarany. Ary amin'ny maha fantsom-pifandraisana lehibe indrindra an'ny fifandraisan'ny mpanjifa, ny lanjan'ny fanohanan'ny mpanjifa virtoaly dia avo lenta hatrany. Ny serivisy ho an'ny mpanjifa e-varotra dia misy fanamby sy fanerena vaovao. Voalohany, ny mpanjifa ao an-trano dia mandany fotoana betsaka amin'ny Internet alohan'ny handraisany fanapahan-kevitra momba ny fividianana. 81% ny valinteny nikaroka ny momba azy ireo